Imodyuli yokushaja amandla e-Super wide ububanzi, abahlinzeki - China Ifektri esheshayo ebanzi eguquguqukayo yamandla module
UR100020-SW EV ukushaja module eziklanyelwe EV DC super ishaja. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi inamandla amakhulu, ukusebenza kahle okukhulu, amandla aphezulu amandla, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
I-UR100040-SW EV yokushaja imodyuli eyenzelwe ngokukhethekile ishaja enkulu ye-EV DC. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi inamandla amakhulu, ukusebenza kahle okukhulu, amandla aphezulu amandla, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Izindlela ezishisayo ezixhuma futhi ezihlakaniphile zokulawula idijithali zisebenza ndawonye ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
I-UR75028-SW EV yokushaja imodyuli eyenzelwe ngokukhethekile ishaja enkulu ye-EV DC. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi inamandla amakhulu, ukusebenza kahle okukhulu, amandla aphezulu amandla, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.